Igawula iphindelela iCovid-19 emaRomeni - Ilanga News
Home Izindaba Igawula iphindelela iCovid-19 emaRomeni
Kuwe umuthi omkhulu kushona uFata Paul Manci
LISALOKHU lisibekele njalo ifu elimnyama ema-Romeni aKhatholika kwisifundabhishobhi saseMariannhill ngenxa yeCovid-19 njengoba ngoKhisimusi kuwe umuthi omkhulu, kushona uFata Paul Manci (66) (osesithombeni) obesebenza eSt Magdalene Mission, eZimbokodweni.
ILANGA lithole ukuthi uFata Manci ushonele esibhedlela saseSpingo emuva kokugula isikhashana ephethwe yilo mkhuhlane obhubhisayo.
Ushona nje, leli bandla belisazikhotha amanxeba emuva kokwanda kwesibalo sezindela ezishone e-Assisi Mission, ePort Shepstone zithathwa yiwona lo mkhuhlane safinyelela ku-11.
Umbhishobhi omkhulu waleli bandla eMariannhill, uWilliam Slattery, utshele ILANGA ukuthi babuhlungu kakhulu ngokudlula kwezisebenzi zeNkosi ngale ndlela. “UFata Manci ubengesona nje isisebenzi kodwa ubengubaba kwabaningi njengoba eke waba ngumqondisi waseSt John Seminary, ePretoria, lapho kufundelwa khona ubupriste. Abapriste abaningi abafunda ePretoria baphekwa nguyena.
“Uphinde waba yi-vicar general eMzimkhulu okuyisikhundla esingatolikwa ngokuthi ngumsizi wombhishobhi. Nalapha esifundabhishobhi sethu, wafika waba yi-vicar general. Ziningi nezimishini asebenze kuzona.
“Njengoba eshone eseZimbokodweni nje, ngoMasingana (ngoJanuary) ubesezosuka kule mishini aye St Xavier, eDassenhoek.
“Ubezoshintshelwa kule mishini hhayi ngoba ubengabathandi abantu baseZimbokodweni, kodwa simshintshe ngenxa yempilo yakhe. Ibingeyinhle njengoba ebephathwa amadolo kubuye kube nzima ukuhamba,” kusho umBhishobhi Slattery.
Uthi uFata Manci ubebambe iqhaza elicacile ekuthuthukiseni umphakathi, ewuthanda nomculo. “Sikhulu isikhala esizovuleka ngokuwa kwezinsika zebandla, kubalwa nalezi zindela ezikhulile naye uFata Manci,” kusho yena.
USister Dominic Mkhize wase-Assisi, uthe sinzima isimo njengoba lezi zindela zishone esikhathini esifishane zilandelana.
“Ezinsukwini eziwu-11 kushone abantu abawu-10 endaweni eyodwa, kuyethusa kakhulu lokho. Lo wesi-11 ushone mhla ka-24 kuZibandlela (December),” kusho uSr Mkhize.
Kusamisiwe ukukhonza emishini yase-Assisi ngenxa yaso lesi simo sokudlula kwezindela.
Previous articleIsilomo ‘sithandazela’ ukushiya iDowns
Next articleBavale unyaka ngokuwina izindondo